Copy Nwamba bụ otu nke kasị mma eserese na-atọ-style egwuregwu na ị nwere ike igwu mgbe ọ bụla n'elu cha cha ohere mpere saịtị. The isiokwu na-echetara nke na-ewu ewu 'Tom na Jerry' show na anya n'ezie na-akpa ọchị kwa. The oghere a na-edoziri na backdrop nke a obodo na ụlọ gburugburu, na a na-egbuke egbuke anwụ na-acha ụbọchị. E nwere ise-esi anwụde na 25 paylines na egwuregwu na-ahapụ gị ịgbanwe nzọ larịị na mkpụrụ ego bara uru dị ka kwa mmasị gị. Ịkụ nzọ ịgba bụ n'etiti £ 0,25 na £ 250 kwa atụ ogho. E nwere a eserese na-atọ style Jazz music ke ndabere na-emepụta a-eji obi ụtọ na ọnọdụ.
Banyere Mmepụta nke Copy Nwamba
Nke a yi katuunu style oghere egwuregwu na ị nwere ike igwu na n'elu cha cha ohere mpere saịtị e mepụtara site NetEnt. A na-ewu ewu online cha cha Ịgba Cha Cha ngwọta na-eweta na narị dị iche iche dị iche iche egwuregwu utu aha ha ndepụta.
Nke a bụ nnọọ anya na-adọrọ adọrọ egwuregwu na a yi isiokwu na mma akara. The akara na-acha ọbara ọbara na-akpa ọchị ihu cat, pink cute ihu cat, iwe iru-acha anụnụ anụnụ cat, a toy òké, mmiri ara ehi kalama na a azụ ọkpụkpụ. The red na-akpa ọchị ihu cat bụ n'elu na-akwụ ụgwọ na akara na 200 ugboro na gị na eto na ise nke ya ụdị. The ala uru ihe atụ nke a n'elu cha cha ohere mpere saịtị game bụ anọ dị iche iche acha cat ubọk Mbipụta. ha na-akwụ 25 ugboro gị n'osisi ọ bụla na ise nke a na ụdị. A ọlaedo cat na akara ma a cat n'olu tie mgbịrịgba bụ bonus akara.
Wild daashi: The ọlaedo cat bụ anụ na akara ma ọ nọ n'ọnọdụ niile ewepu mgbịrịgba akara. Mgbe ọhịa na-egosi na a stacked n'usoro ekpuchi mbụ ukwu, ọ na-akpalite copycat feature. N'okwu a, niile cat si nnọchianya si esi anwụde abụọ ise uzo n'ime ọhịa.
Gbasaanụ daashi: Mgbịrịgba na akara bụ ikposa atụmatụ a n'elu cha cha ohere mpere saịtị game. Ọ na-egosi na na-esi anwụde otu, atọ na ise. Mgbe niile atọ anya ime, na ị na-ọdịda iri free spins. Ndị a spins nwere ike re-triggered n'oge free egwuregwu kwa.
Copycat Njirimara: A zuru tojupụtara nke ọ bụla cat akara activates nke a mma. Mgbe nke a mere, niile ndị ọzọ cat akara na-esi anwụde ghọọ ndị cat na triggered atụmatụ. Ọ bụrụ na-acha ọbara ọbara cat activates copycat mgbe ị-emeri ndị kasị elu n'osisi ebe ọ bụ a top-kpọrọ akara.
Nke a bụ otu n'ime ndị kasị yi na mma-ọgaranya egwuregwu na ị nwere ike igwu mgbe ọ bụla n'elu cha cha ohere mpere saịtị. The ndịna na-aga aga na egwuregwu na-ị ọbịa nile unu nnọkọ.